» एन आई सी एशियाले गर्यो २० लाख बीमा रकम भुक्तानी
एन आई सी एशियाले गर्यो २० लाख बीमा रकम भुक्तानी
काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंकले २० लाख बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । बैंकले बचतसँगै बीमा सुविधाले भरिपूर्ण चमत्कारिक बचत सिरिज अन्तर्गत उपलब्ध रू. २० लाख बिमा रकम जनही रू. १० लाखका दरले दुई जनालाई भुक्तानी गरेको हो ।
बैंकले बुटवल निवासी निशा श्रेष्ठ आले कक्षपति र उनका पति जवीन प्रसाद कक्षपतिले घातक रोग उपचारवापत उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । उनीहरुले बैंकको रुपन्देही जिल्लास्थित सियारी शाखामा सुपर चमत्कारिक तलब बचत खाता खोलेका थिए ।
बैंकले हाल न्यू प्रिमियम सुपर चमत्कारिक बचत खाता ‘डायमण्ड श्रेणी’ का ग्राहकहरूलाई भविष्यमा आइपर्न सक्ने भवितब्यको लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न बीमा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
यस बचत योजनामा १८ वटा विभिन्न घातक रोगको उपचारका लागि रू.१० लाख, दुर्घटनाबाट पूर्ण रुपमा घाइते वा मृत्यु भएका व्यक्ति वा परिवारलाई रू.१० लाख र मेडिकल जाँचमा हुने अस्पताल खर्च वापत रू.१ लाख (अस्पताल भर्नामा रू.८० हजार र बहिरंग उपचारमा रू.२० हजार) सँगै विभिन्न निःशुल्क सुविधाहरू समेत पाउन सकिन्छ ।
बैंकको बीमा सहितको निक्षेप योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म देशभरका ४४५ जनाले बीमा वापतको रू. २ करोड ९० लाख भन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेका छन् ।
यस किसिमका बीमासहितको बचत योजनाहरूबाट आमसर्वसाधारणलाई बचत गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको बैंकले विश्वास लिएको छ ।
निषेधाज्ञामा एन आई सी एशियाले ‘एकिकृत हेल्प डेक्स’ सेवा दिने
एन आई सी एशियाको नयाँ वर्ष योजनाः डिजिटल भुक्तानीमा २० प्रतिशतसम्म छुट तथा नगद फिर्ता